Rafitra Refrigeration Penthouse vaovao efa natambatra vita-NEWS-Square Technology Group Co., Ltd.
Vita ny rafitra vaovao momba ny fampangatsiahana trano Penthouse efa vita
Ny Square Technology dia namoaka ny rafitra fampangatsiahana vaovao tamin'ny 1,2020 Jona. Ity rafitra fampangatsiahana feno aseho ity dia 100% efa voaangona ao anaty fefy mihidy tanteraka alohan'ny fanaterana. Izy io dia saika nanala ny asan'ny fantsom-pifandraisana an-tsaha, afa-tsy ny fifandraisana misy eo amin'ny rafitra fampangatsiahana sy ny condenser evaporative, izay hapetraka eo an-tampon'ny frame. Ity toetran'ny endrika kanto ity dia manasongadina ireto manaraka ireto:
Mitsitsia habakabaka. Famolavolana paikady, ny fitaovana sy ny fantsona rehetra dia mihidy ao anaty vatan'ny tontonana amin'ny alàlan'ny endrika mahay
Mitsitsy vola. Tsy ilaina ny manamboatra efitrano fampangatsiahana fanampiny. Mitsitsia vola lany amin'ny fanamboarana. Porofon'ny toetr'andro ny fefy. Tsy mila firafitra na tafo fanampiny.
Ny vidin'ny fametrahana saha sy ny fotoana voatahiry. Ny singa rehetra dia efa voaangona ary ny fantsona dia mifandray. Ny mpanjifa dia mila mampifandray fantsona telo fotsiny eo anelanelan'ny rafitra condenser sy ny vata fampangatsiahana any an-tsaha.
Angovo-mamonjy. Hatramin'ny 20% ny herinaratra azo avotana satria ny inverter dia ampiasaina hampihenana ny herin'ny motera tsy misy dingana ary amin'ny tena izy ho valin'ny entana tena izy.
Fanaraha-maso ny toetrandro. Ireo mpankafy dia napetraka mba hanome rivotra miditra an-tery ary hitazona ny mari-pana ao anaty ao anatin'ny sehatry ny asa. Omena ao anatin'ny vala ireo jiro.
Ny varavarana dia omena amin'ny lafiny rehetra amin'ny vala mba hahafahana miditra tanteraka amin'ny serivisy fitahirizana.
Natao mifanaraka amin'ny filàna isan-karazany. Ny rafitra dia azo namboarina manokana mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa isan-karazany, ao anatin'izany ny maodelim-piraketana samihafa, ny fampangatsiahana entana, ny vata fampangatsiahana sns.